ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “ဦးပိုင် အလိုမရှိ ... ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ချက်ချင်းထွက် ... သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ” ၁၁-၅- ၂၀၁၃ ရက် လက်ပံတောင်းဒေသခံများရဲ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲ (ရုပ်သံ)
“ဦးပိုင် အလိုမရှိ ... ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ချက်ချင်းထွက် ... သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ” ၁၁-၅- ၂၀၁၃ ရက် လက်ပံတောင်းဒေသခံများရဲ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲ (ရုပ်သံ)
How come! those who are in charge of these mining projects and keep silent and ignore the victims! I don't think these people are happy to express their deepest suffering and dissatisfaction for their lose of lands and livelihood. It seems to me they are shouting out of fear and anger. There must be something very wrong in the leaders' conscience. At least, justice need to be bring to them atamaximum degree. Whoever rules the country, should not forget these kind of injustice and should not let it happen to it to powerless people. A ruling class should be mindful of this. Learning about laws and politics will be useless the leader of the country ignore such injustice. Prosperity of the country does not rest only in the economic development but also the justice which the legal system of the country must provide. Please, i do beg, those who can reach to the power the country, be mindful and merciful to those victims and takeaconsiderable actions for them. Their problems are our problems, their difficulties are our difficulties, their sadness are our sadness their happiness are our happiness. The leaders must have this kind of attitude.That is how General Aung San believes and practices in his political life. If the leaders do not have these attitude, there must be something very wrong with their political intention.!!!
... ထောက်ခံပါတယ် ။
... ဆန္ဒ ပြသူများကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှာကို လုံးဝ
မလိုလား ပါကြောင်း .... ။
လက်ပံတောင်းတောင်ဟာ ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး စိတ်ဓာတ်မကျတဲ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ..
ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်၊ ပြည့်သူ့အသံကို ဥပေက္ခာပြုခံရဆုံးအဖြစ် ကမ္ဘာက စံထားရတဲ့ မိုဒယ်တစ်ခုတောင် ဖြစ်လာမလားမသိဘူး။
ရက်တွေ ရှည်ကြာနေတာဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အစီရင်ခံစာအတိုင်း အဆင့်ဆင့် အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်း..
ဘာတွေကို တစ်ခုချင်း လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတာ၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ.. မီဒီယာတွေကနေတဆင့် တိုင်းပြည်ကို တရားဝင်အသိပေး ချပြသင့်တယ်။
အခုတော့ ငါတို့လုပ်ချင်လုပ်မယ်၊ မလုပ်ချင်မလုပ်ဘူး။ အသိပေးချင်ပေးမယ်။ မပေးချင်မပေးဘူး။ ဘယ်သူ့မှ သောက်ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြဿနာပြေလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။
လက်ပံတောင်းတောင် ပြဿနာကို အခြေခံပြုပြီး ပြည်သူတွေဖက်က ရပ်တည်သူတွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချနေတာတွေကလည်း သမိုင်းမှာ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပျက်တော့မယ့် အမဲစက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။